के तपाईं जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस् « Sajhapage24
के तपाईं जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 28, 2018
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका छेउछाउको जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको छ। जग्गा कारोबारीहरु समेत बढेकाले ति क्षेत्रको जग्गा पनि दिनप्रतिदिन महँगो हुँदै गएको पाइन्छ। अझ भूकम्पपछि बनाइएका घरहरु किन्नेभन्दा सकेसम्म आफैले जग्गा किनेर घर बनाउने प्रचलन बढेको सम्वद्ध जग्गा कारोबारीको भनाइ छ। उपत्यकाको केन्द्रमा बाँकी रहेका केही जग्गा पनि छोइनसक्नु नै छ। छेउछाउका जग्गा तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले ति क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चासो पनि बढेको छ।
उपत्यकाका सम्वन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यअनुसार यी क्षेत्रका जग्गा सस्ता मानिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एउटा काठमाडौं जिल्लाभरि सबैभन्दा सस्तो जग्गा भनेको थानकोट, कीर्तिपुर नगरपालिकाको मच्छेगाँउ, नागार्जुन नगरपालिको सितापाइला, बालाजु क्षेत्रको मनमैजु, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाभित्रका कपन, चुनिखेल, विष्णु, लगायतका ठाउँ रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै साँखु गोठाटारमा पनि जग्गाको भाउ केही सस्तो देखिन्छ। मालपोत कार्यालयकाअनुसार यी ठाउँहरुमा गोरेटो बाटोले छोएको जग्गा प्रतिआना ३० हजारदेखि पक्की पिच सडक पुगेको ठाउँमा साढे ३ लाखसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ। हुन त यो सरकारी मूल्याङ्कन हो। चलनचल्तीमा भने प्रतिआना २ लाख देखि पिच सडकले छोएको ठाउँमा ६ लाखसम्म कारोबार हुने गरेको कारोबारमा संलग्न हरि केसीले बताए।
ललितपुर ललितपुर जिल्लाको लेले, लामाटार, सानागाउँ, लुभु क्षेत्रमा पछिल्लो पटक धेरै जग्गाको कारोबार हुने गरेको ललितपुर मालपोत कार्यलयका अधिकृत मीन भट्टराईले जानकारी दिए।तुलनात्मक रुपमा ति क्षेत्रमा जग्गा सस्तो पनि रहेको उनले बताए। निर्माण हुन लागेको बाहिरी चक्रपथले जोड्ने भएका ठाउँमा जग्गाको बढी कारोबार हुने गरेको उनले जानकारी दिए। यी ठाँउहरुमा प्लटिङ गरेर बेच्नेदेखि घर बनाएर बेच्ने कारोबारीहरुको चलखेल समेत बढेको छ। यी ठाउँहरmमा प्रति आनाको मूल्य गोरेटो बाटोमा २ लाख ५० हजार देखि पिच सडकमा ६ लाख सम्म चलन चल्तिमा रहेको कारोबारमा संलग्न मिलन श्रेष्ठले बताए।
सरकारी मूल्याङ्कन भने यी ठाउँमा गोेरेटो बाटोमा प्रतिआना ३५ हजार देखि मूल सडकमा ३ लाख ७५ हजार सम्म रहेको छ। भक्तपुर पछिल्लो तथ्याङक अनुसार भतmपुर जिल्लामा जग्गाको कारोबार निकै बढेको छ। अरनिको राजमार्ग बिस्तार गरी भक्तपुर हुँदै विपी राजमार्ग बनेपा सिन्धुली हुँदै पूर्वका जिल्लासम्म सडक विस्तार भएपछि मानिसको रोजाइमा भक्तपुर जिल्ला पर्ने गरेको जग्गा कारोबारीको भनाइ छ।
भक्तपुरको कटुन्जे, सिपाडोल, दुवाकोट, मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण, बालकोट क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा बढी जग्गा किनबेच हुने गरेको भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कमल तिमल्सिनाले बताएका छन्। यी ठाउँहरु अरनिको राजमार्गबाट नजिक पर्ने र अरु ठाउँको तुलनामा सस्तो पनि पर्ने भएकाले ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको तिमल्सिनाको भनाइ छ। यस ठाउँमा गोरेटोबाटोले छोएको ठाउँमा प्रति आना दुई लाखदेखि पिच सडकमा सात लाखसम्म चलनचल्तीमा रहेको एक कारोबारीको भनाइ छ। मालपोत कार्यालय भक्तपुरले भने यस ठाउँको जग्गाको मूल्याङकन गोरेटो बाटोले छोएको ठाउँमा प्रतिआना ५० हजार देखि पिच सडकमा चारलाखसम्म गरेको छ।